वर्षाका लागि कस्तो मेकअप उपयुक्त हुन्छ ? - श्रृंगार - प्रकाशितः भाद्र ५, २०७५ - नारी
लक्की श्रेष्ठ महत
वर्षामा पसिना आउने भएकाले मेकअप टिकाउन वाटर प्रुफ मेकअप गर्नुपर्छ । दिउँसो मेकअप गर्दा लाइट ओयल फ्रि फाउन्डेसन प्रयोग गर्न सकिन्छ । वर्षामा लुज पाउडर वा ट्रान्सलुसन पाउडर प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । म्याट लिपिस्टिक प्रयोग गर्नुपर्छ भने आँखामा वाटर प्रुफ मस्कारा तथा वाटर प्रुफ लाइनर प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मेकअप गर्दा बेसको सही छनौट गर्न सक्नुपर्छ । यदि चिकबोन ठूलो भए डार्क सेड र लाइट सेड मिलाएर कटिङ गर्ने । फेस लामो छ भने चिकबोनबाट हल्का राउन्ड सेपमा लाने । राउन्ड सेप फेसमा चिकबोनबाट हल्का रूपमा ज लाइनमा लाने । ओठमा लिपिस्टिक लगाउनुअघि हल्का फाउन्डेसन लगाउँदा लिपिस्टिक बढी टिक्छ । ओठको सेपअनुसार लिपलाइनरले कटिङ गर्ने, सेप मिलाउने अनि हल्का मर्ज गर्ने । वर्षामा पिंक, पिच तथा रेड कलर बढी खुल्छ । वर्षामा छाला बढी तैलीय हुने हुँदा राति सुत्नुअघि मेकअप रिमुभरले राम्रोसँग मेकअप पुछ्नुपर्छ ।
वर्षामा छालाको स्याहारका लागि के गर्न सकिन्छ ?
वर्षामा बढी पसिना आउँछ । पसिनाले छालामा भएको धूलोका कणसँग मिक्स भएर इन्फेक्सन सिर्जना गर्छ । त्यसैले वर्षामा नियमित रूपमा अनुहारको क्लिन्जिङ गर्नुपर्छ । मनसुनी हावामा बढी ब्याक्टेरिया हुन्छ । डिप–पोर क्लिन्जरले छालाको भित्री भागसम्म गएर राम्रोसँग सफाइ गर्छ । बढी पसिना आउने भएकाले छालाको नरमपनमा कमी आउँछ । अत: छाला डिहाइड्रेड नहोस् र त्यसको कोमलता पनि कायम रहोस् भनेर अल्कोहल फ्रि टोनर प्रयोग गर्नुपर्छ । वर्षामा छालालाई मोइस्चराइज गर्न एलोबेरा जेल धधप्रयोग गर्न सकिन्छ ।
केशको स्याहारका लागि के गर्नुपर्छ ?
वर्षाका कारण केश भिजे तुरुन्तै माइल्ड खालको स्याम्पुले वास गर्नुपर्छ । कारण वर्षाको पानी प्रदूषणयुक्त हुन्छ । हेयर कलर प्रयोग गर्दा त्यसबाट केशको रंग तथा टेक्सचर दुवै प्रभावित हुन्छ । वर्षामा प्रदूषणका कारण केशमा मिनरल्स जम्मा भै केश कमजोर हुन्छ । पसिनाका कारण कतिपय मानिसको शिरमा फंगल इन्फेक्सन हुनसक्छ जुन डेन्ड्रफको सबैभन्दा ठूलो कारण बन्छ । त्यसैले वर्षामा दिन बिराएर कुनै राम्रो एन्टी डेन्ड्रफ स्याम्पुले केश धुनुपर्छ । मेथीको दाना तथा निमको पात पिसेर त्यसमा प्याजको रस मिसाई केशमा प्रयोग गर्दा पनि डेन्ड्रफबाट राहत प्राप्त हुन्छ । शिरको छालाको इन्फेक्सन तथा डेन्ड्रफबाट जोगिन काइँयो, रुमाल तथा तकिया शेयर गर्नुहुँदैन भने ती कुराको सफाइमा समेत विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । केश धुँदा काइयो, रूमाल तथा तकियाको खोललै राम्रो एन्टिसेप्टिक घोलमा आधा घन्टा डुबाएर राखेपछि घाममा सुकाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । केशलाई घाम एवं प्रदूषणबाट जोगाउन घाम–पानीमा निस्कदा छाता ओढ्नुपर्छ ।
- पल्स ब्युटिपार्लर, इन्द्रचोक